Nzuzo ICloud + agaghị adị na mba ụfọdụ | Esi m mac
ICloud + Private Streaming agaghị adị na mba ụfọdụ
Dị ka ọ dị na mbụ, na ihe ngosi nke dịruru awa abụọ, Tim Cook na ndị otu ya enweghị ike ịkọwa ntutu na ihe ịrịba ama niile akụkọ a ga-etinye na sọftụwia dị iche iche nke ngwaọrụ niile a ga-emelite n'afọ a.
Ya mere, anyị ga-echere iji gụọ ezigbo mbipụta nke ọ bụla n'ime ha ka anyị nwee ike inweta echiche miri emi banyere ọrụ ọhụrụ ọ bụla, yana uru na ọghọm ya. Ka ọ dị ugbu a, na "obere mkpụrụ akwụkwọ" ahụ ihe a hụworị: mgbasa ozi nkeonwe kwupụtara maka iCloud + agaghị adị na mba ụfọdụ ...
Apple kwuputara unyahu na isi okwu nke WWDC21 ọrụ ntinye ohuru iCloud +. Otu ihe e ji mara ọrụ ọhụrụ a bụ na ọ na-eji teknụzụ na-agba ọsọ nkeonwe na-enyere aka zoo ihe nchọgharị weebụ onye ọrụ. Na nkwupụta nye Reuters, Apple kwadoro na njirimara a agaghị adị na mba ụfọdụ, gụnyere China.
Companylọ ọrụ ahụ gosipụtara na «Onweghi agba anọ»Agaghị adị na China mgbe a tọhapụrụ ya ọha na eze n'afọ a. Ọ gaghị adị na Belarus, Colombia, Egypt, Kazakhstan, Saudi Arabia, South Africa, Turkmenistan, Uganda, na Philippines. Apple kwuru na njedebe ndị a bụ maka usoro iwu nke gọọmentị nke mba ọ bụla.
«Nkeonwe ọsọ agba anọ» (Ntughari nke Onwe) bụ atụmatụ enyere iji nye ndị ọrụ nchekwa nzuzo ọzọ mgbe ị na-eme nchọgharị na weebụ. Usoro yiri nke VPN na-eji.
Apple na-akọwa na mgbe ị na-eme nchọgharị na safari Na sọftụwia na - eme n'ọdịnihu, "Onwe Relay" ga - ahụ na okporo ụzọ niile na - ahapụ ngwaọrụ onye ọrụ ezoro ezo, ka onye ọ bụla n'etiti ndị ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ a na - eleta nwere ike ịnweta ma gụọ ya, ọbụnadị Apple ma ọ bụ netwọkụ onye na - eweta ọrụ. A ga - eziga arịrịọ ndị ọrụ niile site na ntanetị ntanetị dị iche iche abụọ.
Nke mbụ ga-ekenye onye ọrụ a adreesị IP na-enweghị aha dabere na mpaghara gị, mana ọ bụghị ọnọdụ gị. Nke abụọ na-emebi adreesị weebụ ha chọrọ ịga ma wega ha ebe ha na-aga. Nkewa nke a nke ozi na-echebe nzuzo onye ọrụ n'ihi na ọ nweghị ụlọ ọrụ nwere ike ịchọpụta onye onye ọrụ bụ yana saịtị ha gara.
Akpa ọsọ agba anọ na-zitere site na a apple nkesa, na nke abụọ bụ a onye ọrụ mpụgadị ka Reuters. Apple ekwughi onye ọ bụla na-ebu ndị ọzọ ọ na-eji, mana Reuters na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ ga-ekpughere nkọwa ahụ n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » macOS Monterey » ICloud + Private Streaming agaghị adị na mba ụfọdụ
Anọ atụmatụ ọhụrụ na watchOS 8 nke ga-abara anyị uru nke ukwuu